Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-50B / HS25X2 - Shiinaha Shanghai IPKIS
Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-50B / HS25X2
Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter
Tan iyo bilowgii 2012, IPKIS soo bandhigay taxane AF ee alaabta module-line sub oo codsatay patent ah. dhowr sano hawlgalka suuqa iyo horumarka ka dib markii, noocyo ka korayaan. Products hubkaas ayaa loo isticmaalaa in sanduuqyada la isticimaalay xoog, armaajooyinka qaybinta danab yar yahay, qalab qaboojiye farsamo, amraya posts iyo tareennada electrified, gaar ahaan nidaamka awood looxaanta ah.
IPKIS module sub-line, design casri ah, isticmaalka cusub ee multi-lakabka technology copper kabka si ay u xalliyaan qaybinta terminal multi-laan caqabadaha meel line, ay hawlgal fudud, xidhiidhka ka waa ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, waa qaybinta terminal multi-dhibic ugu fiican The lammaanahaaga line.
Sanadihii la soo dhaafay, IPKIS R & D kooxda, macaamiisha horumarinta ee alaabta cusub, waqtiga iyo degdeg follow-up in shirkadda sannado badan diirada roobab technology, Yimaadeen set oo ah xal u dhiganta si ay u horumariyaan Baaragaraafka ah moodooyinka cusub, kaamilka ah tallaabadaas macaamiisha In qalab cusub.
Eeg nuurka degdeg ah
Isticmaalka abuurnimo habka wax soo saarka gaar ah, khadka caadiga ah block copper feer cadaadis weecinta, halkii line sanduuqa cadaadiska wax taaj oo nooca qaadista, ka badan la isku halayn karo;
design caaryada sax, in la abuuro qaab si buuxda u soo lifaaqay qurux badan, ammaan ah, qurux badan, wax macno leh,
waxaa iska falno
waxyaabaha Safe oo lagu kalsoonaan karo cusub, qaliin fudud, oolnimada sare, muuqaalka quruxda badan ee fasalka sare;
biiro Direct oo ku biiray haboon, aan xuduud lahayn, mid kooban oo dareen leh, badbaadiyo waqtiga iyo shaqada lagu badbaadinayo rakibaadda iyo hawlgalka bannaan.
AF boosteejada laga boodo taxane fikrado qaab-dhismeedka cusub, boodo sheet tabinta isticmaalo geedi socodka gaarka ah ee wax taaj oo kale, gelin terminal line kor u helaan 35mm2 ku crimp sanka ama saxan copper leh saxan toos crimp; terminal outlet waxaa midaysan sida nooca-sallaan Crimping tube qaado, crimping qeybo ka mid ah xaashida tabinta waxaa qaabeeya galay qaab qeebta ah, la kordhiyo aagga xiriir silig, si loo hubiyo in crimp more lagu kalsoonaan karo, si looga hortago saamaynta anti-gariirka.
Haddii khadka kasta u baahan tahay wax badan oo ka mid ah line-sub, ku caddaymaha jira ee aan la fulin karo, taxane AF loogu talagalay in ay isticmaalaan laba boosteejada laga boodo ku xiran by balastar copper ee isku midka ah.
AF2 beddelato muuqaalada si toos ah design waa terminal boodo galay terminal ah si toos ah rakibay in outlet ah biiro (circuit breaker), rakibo waa mid fudud oo lagu kalsoonaan karo, loo yareeyo bannaan oo kayd ah kharashka.
Previous: Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-HS35 / HS16X2
Next: Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-95B / HS16X4
100 Labo Xidig dibada Box Qaybinta
3 Phase Pdu Power Box Qaybinta
4 Way Box Qaybinta
Cable Box Qaybinta
Qaybinta Box Price
Laydhka Box Qaybinta
Birta Box Qaybinta
Network Box Qaybinta
One Jiid Laba Box Qaybinta
Box dibada Power Qaybinta
Box Qaybinta caaga
la qaadan karo Power Box Qaybinta
Qalabka Power Qaybinta
Dhigeysa Mount Power Box Qaybinta
Wall Fardoolayda Box Qaybinta
Box Qaybinta biyaha
DC1100V fiyuuska double fiyuuska core caag ah
Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-150B / HS16X6
Doorsoon fiyuuska hal core
Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-95B / HS16X4
Gudbaan double-kala AF1-70BX2 terminal line ...
Grid ka go'an boosteejada sanduuqa meter AF1-HS35 / HS16X2